अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कति अर्ब डलर खर्च गरेर भाग्यो ? - Himali Patrika
अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कति अर्ब डलर खर्च गरेर भाग्यो ?
हिमाली पत्रिका ३१ साउन २०७८, 6:02 pm
सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले तालिबान विद्रोहीहरू विरुद्ध लड्नका लागि अर्बौं डलर खर्च गरेको छ । उक्त देशमा अमेरिकी सैनिकहरूको संख्या बढ्दै जाँदा खर्च झन् झन् बढेको हो ।
अन्य देशले पनि आफ्ना सैनिक त्यहाँ तैनाथ गरेका थिए तर अमेरिकी सैनिकहरू सर्वाधिक संख्यामा भएकाले त्यसको खर्च पनि उसले धेरै बेहोरेको थियो ।
सन् २०१० देखि २०१२ सम्म अफगानिस्तानमा अमेरिकाका एक लाख सैनिकहरू थिए । तिनको खर्च वर्षको १ खर्ब डलर पुग्ने गरेको सरकारी तथ्यांक पाइन्छ ।
अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा युद्धको खर्चको एक अध्ययनमा अमेरिकाले सन् २००१ देखि २०२० सम्ममा ९७८ अर्ब डलर खर्च गरेको पायो ।अमेरिकापछि बेलायत र जर्मनीका सैनिकहरू अत्यधिक संख्यामा थिए । बेलायतले ३० अर्ब र जर्मनीले १९ अर्ब डलर खर्च गरेका थिए ।
अफगानिस्तानको विद्रोही संगठन तालिबानले आफ्नो मुलुक फर्किन चाहने विदेशीलाई फर्किन दिने बताएको छ ।
काबुलमा तालिबान पसेको समाचारपछि पहिलो सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत तालिबानले यस्तो बताएको हो । उसले अफगानिस्तानमा नै बस्न चाहने विदेशी नागरिकले तालिबानको प्रशासनमा दर्ता गराउन पनि भनेको छ ।
तालिबानले देश फर्किन चाहने विदेशीलाई जान दिने
अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता ल्याउन थप पाँच हजार सैनिक काबुल पठाएको छ । त्यस्तै अन्य मुलुकले पनि आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन पहल गरिरहेका छन् ।
तालिबानले जितको खुसीयालीमा आफ्ना लडाकुहरुलाई गोलीबारी गर्न नदिने बताएको छ । साथै सरकारी सेनालाई पनि आफ्नो घर फर्किन दिने तालिबानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै विमानस्थल र अस्पताल सञ्चालन गर्न दिने र अत्यावश्यक सेवामा कुनै रोक नलगाइने तालिबानको भनाइ छ ।
पछिल्लो १० दिनमा तालिबानले काबुलबाहेकका अफगानिस्तानका सबै प्रमुख सहरमा कब्जा जमाइसकेको छ र अहिले काबुलमा तालिबानका लडाकुहरु प्रवेश गरेका छन् ।
तालिबानले काबुलमा कुनै आक्रमण नहुने र शान्तिपूर्णरुपमा सत्ता हस्तान्तरणको लागि वार्ता भइरहेको बताएको छ । यसैबीच अफगानिस्तानका गृहमन्त्रीले पनि शान्तिपूर्णरुपमा संक्रमणकालीन सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण हुने भन्दै मानिसहरुलाई चिन्ता नलिन आग्रह गरेका छन् ।